Emphakathini wethu, kukhona isifiso abantu abangashadile sizizwe sikhishwe inyumbazane muncu. Kodwa isazi sokusebenza kwengqondo sase-University of California Santa Barbara Bella Depaulo ngokuyinhloko aphikisane nalesi sitatimende. Ukuze konke ukuphila kwakhe omdala (futhi manje Bella, iminyaka engu-63), akakaze azizwe engajabule yize ayengakaze beshadile futhi ayinaso izingane. Eminyakeni engaphezu kwengu-10, isazi wanika cwaningo izinzuzo ngokwengqondo nangokomzimba enomunyu. Phakathi nalesi sikhathi, uDkt DePaulo bakwati kuhlatiya imiphumela izifundo zesayensi ezingaphezu kuka-800 ezikhuluma ngale ndaba. Funda ukuthi kungani nesizungu - kuhle abantu.
inethiwekhi Okuningi ebanzi nomphakathi
Abantu abaningi ngephutha sikholelwe ukuthi imibhangqwana eshadile ukuba nabangane abengeziwe kuka e singletons. Nokho, ngokusekelwe idatha izibalo, inethiwekhi branched nomphakathi njengoba abangashadile behlanganyela ngokufanayo nje. Lokhu inzuzo itholwe 2015 by zezenhlalo Natalie Sarkisyan noNawomi Gerstel, ngubani esiphethweni zokuxhumana ezihlukahlukene kanjani phakathi ibalula American omdala bese abantu abashadile. Ngenxa yalokho, kwatholakala ukuthi ongashadile uvame kakhulu ukuxhumana nabangani babo, izihlobo, omakhelwane kanye nje abantu obajwayele. Bazimisele ukuhlinzeka zonke usizo kungenzeka amalungu inethiwekhi yabo ebanzi nomphakathi.
Ngakolunye uhlangothi, uma umuntu ongashadile zikhona yini izinkinga, abantu ayemvuse ngake ngasizwa ukuze enze indlela yakhe emuva isinyathelo. Ngamanye amazwi, lo olulodwa namanje sizibona endololwaneni, esiza siqhubeke siphila ezimweni ezinzima. Kwenzeka inqaba, isizungu kwandisa ubudlelwano nomphakathi kokubili amadoda nabesifazane, kungakhathaliseki Iholo elingakanani noma isizinda somuntu.
I abanothando imfundo ngokomzimba
Lokhu okwashiwo yilo mlobi has iqiniso abanye: Ngokombono wemibhangqwana eminingi, ukuze bagunyaze ubudlelwane, "ukuzola" futhi ayisekho bazinakekele. Okungenani uma kuziwa ukuya ejimini, kuba umsebenzi ewusizo, ukuqinisa impilo, kuba ukuphela ohlwini. Lapho abacwaningi sabuka imikhuba yabantu abangaphezu kuka-13,000 nabesifazane abaneminyaka engu-18 kuya ku-64, ososayensi baye bathola ukuthi Bachelors ukuchitha amahora angaphezu ngeliviki abasemakilasini ejimini. Olunye ucwaningo ezithakazelisayo lwalwenziwa 2015 e-Europe. Lapho abacwaningi beqhathanisa umzimba mass izinkomba abantu 4,500 abasuka emazweni ayisishiyagalolunye European, kwatholakala ukuthi isilinganiso eyodwa 2,27 amakhilogremu alula kakhulu kunomoya abaphendulayo zabo ezishadile.
Ukuhlaziywa kolwazi zemindeni nabezindlu cwaningo kazwelonke wabonisa ukuthi kubantu abanesizungu ithambekele kakhudlwana ukukhula siqu. Phakathi kokunye, abaphendula wakhetha izitatimende ezilandelayo:
Life mina - ke kuyinchubo lechubekako yokufunda, ezishintsha njalo, futhi ukukhula umsebenzi.
Kubalulekile njalo yinto entsha inselele kimi, mina nethuba ngenhloso yokushintsha umqondo ogcwele waleli zwe elizungezile.
-Singles bavumelana nala izitatimende, kuyilapho abantu abashadile baye badlula ngawo.
Ngemva kokushada abantu babe ngaphansi ophanayo
Kwenye inhlolo-vo omele kazwelonke lwenziwe e-United States ngezigaba ezimbili: okokuqala, esikhathini kusuka 1987 kuya 1988, bese futhi eminyakeni emihlanu kamuva. Bella Depaulo bacubungula idatha futhi wathola ukuthi abaphendulayo abashadile kancane nabazimisele imali kubangani, uma kuqhathaniswa nalabo sasingakafiki Sahlukana inkululeko. Kumele kuqashelwe ukuthi le miphumela zisebenza kuphela amadoda. Ngakho, isilinganiso oyedwa American lunikezwe abangane nezihlobo zakhe e dollar angaphezu kuka indoda eshadile 1875. Kodwa kuwufanele yini ukuba umuntu ahlukanise sakhe sokuba nesandla esivulekile futhi liphume cishe kwezibalo odlule (e 1275 dollars).
I uchwepheshe uphetha ngokuthi: "Naphezu kweqiniso lokuthi abashadayo ushadile, kufanele imithombo eminingana imali, it is hhayi kubonakala ukuthi banesandla esivulekile. Ngokuphambene, abantu abashadile kancane ukukuhlanganyela nabanye ngengcebo yabo nabangani bakho nezihlobo. Awukwazi ukusho mayelana wodwa kanjani, bazimisele kakhudlwana ukuzamukela ukunikeza imali ebolekiwe, kokuba oyedwa kuphela umthombo engenayo. "
Kuzuze Mental Health
Udokotela Emmi Morin ugomela ngokuthi isizungu enezinto eziningi izinzuzo bempilo yengqondo. Izosiza ube ikhiqize kakhudlwana futhi umuntu zokudala. Ingabe unayo nesikhathi esikhululekile esengeziwe, okuyinto ungachitha ngokubona kwayo. Okuhlangenwe nakho kuye kwabonisa ukuthi abantu abaningi nikela lokhu isikhathi sokuthi manje usuzazi kangcono. Le miphumela uqinisekise kokuma ezinye izazi zokusebenza kwengqondo ezizihlanganisa isizungu ngomuzwa inkululeko, indiza, ugqozi. Ngokwesibonelo, abaculi ngokuvamile umhlalaphansi ukudala wobuciko wakho olandelayo.
ESistine Chapel - kuyinto ... lo eSistine Chapel e Vatican
Umuthi "Alprazolam". Izibuyekezo. imfundo
Indlela yokwenza i-aple crusher ngezandla zakho